Damaca Dhul Balaadhsiga Majeerteeniya Iyo Moganaanta In Badan!Q.2 – somalilandtoday.com
Damaca Dhul Balaadhsiga Majeerteeniya Iyo Moganaanta In Badan!Q.2
Inta laga dhammaystirayo Dastuur federaal ah oo Puntland wax ka ansixisay ka dibna afti dadweyne lagu meelmariyey, Puntland waxay lahaaneysaa awood Dawlad madaxbannaan. Dawladda Puntland waxaa u bannaanaanaysa in ay dib u eegto arrimaha ku xusan faqradaha 1aad, 2aad iyo 3aad ee isla qodobkan, haddii: (b) Soomaalidu ku heshiin weydo qaab-dhismeed dawladeed oo aan ka hooseyn nidaamka Federaaliga ah. (t) Ay daba dheeraadaan daganaansho la’aanta iyo dagaallada ka aloosan qaybaha kale ee Soomaaliya. Mowqifka cusub ee Xukuumadda Puntland ka qaadato arrimahaas waxaa cod saddex meelood laba (2/3) ku ansixinaya Golaha Wakiillada, ka dibna waxaa loo qaadayaa afti, sida ku cad qodobka 139-aad faqradiisa 1aad ee Dastuurkan. Qodobkaa 4aad farqada 3aad Wuxuu qeexaya in Puntland ilaa inta afti loo qaadayo dastuur federal ah oo ay Somaliya yeelato Puntlandna wax ka ansixisey, Puntland waxay lahaaneysaa awood Dawlad madaxbannaan.Sidaa darteed Punland imiga waa dawlad Madaxbanaan waayo dastuur federal ah oo afti loo qaadey ma jiro.Qodabada kale ee xisaha leh waxaa ka mida kuwan: Qodobka 5aad DADKA Dadka Dawladda Puntland waa dadka u dhashay Puntland iyo qof kasta oo Puntlandnimada ku helay qaab sharci ah. Xeer u gaar ah ayaa qeexi doona Puntlandnimada, xaqa degenaanshada iyo kasbashada meeqaanka Puntlandnimada .Qodabada ka hadlaya muwaadinimada puntland waa kuwo ka hor imanaya nidaanka federalka ah waayo waxaa aan meelna kaga jirin xuquuqda qofka Somaliga ah ee federalka ay wadaagaan,kaasi ma waxaa loola dhaqmayaa ruux ajanabi ah .Qodobka 7aad DHULKA IYO SOOHDIMAHA Dhulka Puntland waxa uu ka kooban yahay gobollada Bari, Nugaal, Sool, Cayn, karkaar, Mudug, Heylaan iyo Sanaag. Midnimada dhulka Puntland waa lama taabtaan, lagumana xadgudbi karo, lamana kala qaybin karo. Puntland waxay soo dhaweyneysaa lana xaajooneysaa degmo iyo gobol kasta oo doonaya inuu ku soo biiro Dawladda Puntland. Dhulka Puntland waxaa ku dhan hawada sare, berriga iyo dhulka hoostiisa, jiidda dhaqaalaha ee badda oo dhan 200 maylka badda ah oo ka bilawda halka uu ku dhammaado hirka ugu dambeeya, waxaana mas’uul ka ah Dawladda. Qodabadani waa kuwo halis ku ah nabadgelyada mandaqada waayo Puntland waxay dastuurkeeda ku darsatey gobolo iyo degmooyin dal deris la ah oo aaney cidna wax ka weydiin iyada oo ku xadgudubtey xeerarka caalamiga ee xududaha la aqoonsan yehay waayo Somaliland Xuduudaheedu waa kuwii shanta Somaliyeed lagu dhisay ee lagu kala qeybiyey,isku keenida shantii Somaliyeedna waa arin kale oo hada aan haabkaba lagu haynin waana dalal kala madax banaan maanta.Sidaa darteed Caalamku waa in uu Puntland gardaradeeda meel saaraa. Lasoco Qaybaha dambe……….